Ronaldo, Pogba iyo Ferdinand oo isku dayey inay la dagaallamaan Feeryahanka haysta Diinta Islaamka ee Khabiib Nurmagomedov… + SAWIRRO – Gool FM
Haaruun October 6, 2021
(Manchester) 06 Okt 2021. Xiddigaha Manchester United ee Cristiano Ronaldo, Paul Pogba iyo weliba daaficii hore ee Kooxdaas Rio Ferdinand ayaa isku dayay inay la dagaallamaan Feeryahanka haysta Diinta Islaamka ee Khabiib Nurmagomedov, laakiin maxaa ku dhacay.?
Si dhib yar ayaa loo garaacay Cristiano Ronaldo, iyadoo ay daawanayeen xiddigaha saaxiibbada ay yihiin ee ay ka wada tirsan yihiin Kooxda Manchester United, xilli CR7 uu isku tijaabinayey inuu iska celin karayo feeryahankan Muslimka ah ee Khabib.
Manchester United ciyaartoyda ka tirsan ayaa intooda badan Magaalada Manchester ku soo dhoweeyey Khabiib oo daawaday kulankii garoonka Old Trafford ka qabsoomay Sabtidii hore, kaasoo ay barbaro 1-1 la geleen Everton, waxaana kaamirooyinku ay qabteen Feeryahankan oo dusha sare garoonka saaran oo gacanta ku haysta Maaliyadda uu Man United u xirto Cristiano Ronaldo.
Kabtanka xulka qaranka Portugal oo si fudud ku dhaafa daafacyada garoonka gudihiisa uu ku wajaho kaddibna goolal tiro badan ka dhaliyo waxay ahayd maalin la tusay itaalkiisa oo uu Feeryahan Khabiib si dhib yar oo fudud dhulka u dhigay, iyadoo ay goobjoog ahaayeen Ferdinan oo laftiisu isku taagay Khabiib, laakiin aan isku ceebaynin sida Ronaldo iyo Pogba oo kale.
Inkastoo sheekadani ay ahayd mid kaftan iyo Madadaalo ah maadaama ay feeryahankan saaxiibbo yihiin xiddigaha aan soo sheegnay ayaa haddana sawirrada laga soo qaaday markii Ronaldo iyo Khabib ay faro ka ciyaarka samaynayeen ayaa warbaahinta Ingiriisku soo bandhigeen, waxaana ka muuqanayey labada shaqsi oo Madaxa isi saartay.
Khabib Nurmagomedov ayaa markaa kaddib la kulmay hoggaamiyihii hore ee Manchester United ee Sir Alex Ferguson oo ay dhex martay sheekadii qamriga ee Alex uu ka dalbaday Khabib, balse Feeryahanku uu Ferguson u sheegay in haddii uu qamriga cabo uu burburin doono.
Manchester United oo suuqa ka baadi-goobeysa xiddig beddel u noqda Aaron Wan-Bissaka… (Yaa la la xiriirinayaa iminka?)
Kooxda Barcelona oo bisha Janaayo qorshaynaysa bixitaanka Samuel Umtiti & Tababare Ronald Koeman oo ku wargeliyey inuusan ku jirin qorshihiisa